Wood ကအဘို့အ Chencan MS1325AC4ဝင်ရိုးတန်း ATC CNC Router - တရုတ်ရှန်ဒေါင်း Chenan Machinery
Chencan MS1325AC4 ဗိုင်းလိပ်တံ 0-180 ဒီဂရီလှည့်နိုင်သည့်တဦးတည်း type ကိုမှန်ကန်4ဝင်ရိုး ATC CNC သည် router ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့သင်ရုံ, ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ဒါမှမဟုတ် workpiece ရဲ့အရွယ်အစားကိုပြောပြပစ္စည်းများနှင့်ငါတို့သည်ငါတို့၏အကြံပြုချက်ပေးလိမ့်မယ်လိုဖောက်သည်-ဒီဇိုင်းဝန်ဆောင်မှုကိုဆက်ကပ်။
•ခိုင်မာတဲ့အိပ်ရာအတူစက်မှုဇုန်လူတန်းစားစတုရန်းပြွန်နှင့်အတူဖြစ်သော welded ။ သင်ပိုမိုထက် 10 နှစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ chencan CNC သည် router ကိုသုံးနိုင်သည်;
spindle.Well-လူသိများအမှတ်တံဆိပ်, ရှည်လျားအလုပ်လုပ်ဘဝနိမ့်ဆူညံသံ, ထိုအချိန်ကြာမြင့်စွာသေချာစေရန်ခိုင်မာတဲ့ဖြတ်တောက်ခြင်းနိုင်စွမ်းအေးသောလေထု atc • Air ကိုအအေးဗိုင်းလိပ်တံ-9 KW
•အဗိုင်းလိပ်တံကိုထောကျပံ့ဖို့ဂျပန်နာမည်ကျော်လျှော့ချချောချောမွေ့မွေ့ 0-180 ဒီဂရီလှည့်နိုင်,
•ထိုင်ဝမ် SYNTEC ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အ-လွယ်ကူစစ်ဆင်ရေး။ အော့ဖ်လိုင်းစစ်ဆင်ရေးပိုစားပွဲထောကျပံ့;
•အစက်အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်းနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကြောင်းသေချာစေရန်ဂျပန် YASKAWA servo မော်တာများနှင့်ယာဉ်မောင်း-high-performance drive ကိုမော်တာ;
•သွင်းကုန် linear ရထားလမ်း 25 ထိုင်ဝမ် -Smooth နှင့်တိကျသောဂီယာကနေ #, အနိမ့်သံကို၎င်း, တစ်သက်တာဘုံရထားလမ်းလမ်းထက် 10 ဆပိုရှည်ဖြစ်၏
•ဖုန်စုပ် & T-slot ကပေါင်းစပ် worktable - လေဟာနယ်တန်ခိုးတော်အားဖြင့်ကြီးမားသောပစ္စည်းများစုပ်ယူညှပ်အားဖြင့်သေးငယ်တဲ့ပစ္စည်းများ fix နိုင်သလားနှစ်ဦးစလုံး။ MDF ကာကွယ်မှုပြုလုပ်ရန် boardon ရှိ၏
• Helical ထိန်သိမ်းဂီယာ - အစာရှောင်ခြင်းအမြန်နှုန်း, ကြီးမားတဲ့တင်စွမ်းရည်, အားကြီးသောတန်ခိုး, ရှည်လျားတသက်တာနှင့်စက်ကိုပိုပြီးတည်ငြိမ်သေချာအာမခံ;
• Linear Tool ကိုမဂ္ဂဇင်း (ATC 1325 CNC သည် router) - 8 tool ကိုကိုင်ဆောင်သူနဲ့ 8 tool ကိုချိတ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်အချိန်ကုန်သက်သာနိုင်ပြီးဒီတော့အဆင်ပြေအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။6သို့မဟုတ် 10 tool ကိုကိုင်ဆောင်သူများနှင့်ချိတ်လည်းရှေးခယျြမှုနိုင်သလား;
•အလုပ်အဖွဲ့အရွယ်အစား: * 2500 1300 * 300mm (စိတ်ကြိုက်နိုင်);
•ဗိုင်းလိပ်တံ Power: 9KW ATC လေထုအအေးဗိုင်းလိပ်တံ;
• X, Y ဝင်ရိုး: Helical ထိန်သိမ်း, ထိုင်ဝမ် 25 # ရထား Linear စေ့စေ့စပ်စပ်;
• Z ကိုဝင်ရိုး: Ball ကိုဝက်အူစေ့စေ့စပ်စပ် & TBI ထိုင်ဝမ်ရထား 25 # Linear;
•မက်စ်။ လျင်မြန်သောခရီးသွားနှုန်း: 50000mm / မိနစ်;
•မက်စ်။ အလုပ်အဖွဲ့မြန်နှုန်း: 35000mm / မိနစ်;
• Servo မော်တာများနှင့်ယာဉ်မောင်း: ဂျပန် YASKAWA;
•ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်: ထိုင်ဝမ် SYNTEC ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အ;
•စားပွဲတင်: T-slot က & လေဟာနယ်စားပွဲတင်;
• Frame က: welded ဖွဲ့စည်းပုံ;
•ပြောင်းပြန်လှန်: 11kw ပြောင်းပြန်လှန်;
• Cable ကို: ဂျာမဏီ Igus cable ကို;
•အလုပ်အဖွဲ့ဗို့အား: AC380V / 50 / 60Hz, 3PH (Option ကို: 220V);
• X, Y ဆုံးဖြတ်ချက်: <0.01mm;
•ဆော့ဝဲအသုံးပြုပုံများ: Type3 / UcancameV9 / Artcam ဆော့ဝဲ;
•အပြေးပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်: 0-45 စင်တီဂရိတ်;
•ဆွေမျိုးစို: 30% -75%;
1. ကြော်ငြာ: ပစ္စည်းများအပေါ်အနုပညာသက်ရောက်မှုများအတွက်စသည်တို့အမျိုးမျိုးသောတံဆိပ်များနှင့်အရေအတွက်ကပန်းကန်၏ထွင်းထုနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်း, စကျင်ကျောက်။ စကျင်ကျောက်, ကြေးဝါ, သံမဏိနှင့်အခြားသတ္တုပစ္စည်းအပါအဝင်;
2. လက်မှုပညာ: ထွင်းထုအနုပညာလက်မှုပညာမဆိုဘာသာစကားနှင့်ပုံစံများကိုလက်ဆောင်များနှင့်အမှတ်တရပစ္စည်းများပေါ်တွင်စရိုက်အပြောင်းအလဲနဲ့နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်၏ဇာတ်ကောင်များနှင့် stiletto;
3. Decoration စက်မှုလုပ်ငန်း: acrylic, PVC, MDF, အတုကျောက် plexi-ဖန်, ပလပ်စတစ်နှင့်ကြေးနီနှင့်လူမီနီယံနှင့်အခြားပျော့သတ္တုပန်းကန်ထွင်းထုများနှင့်ကြိတ်ဖြတ်တောက်ခြင်း,
4. ဗိသုကာမော်ဒယ်များ: ထွင်းထုဒဏ်ငွေပြတင်းပေါက်, ခြံစည်းရိုးများနှင့်မြို့ရိုးကိုပုံစံများ, etc;
5. တံဆိပ်: ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကျွဲချိုကို, သစ်သားအဖြစ်ပစ္စည်းများအပေါ်ထွင်းထုဖျံနှင့်တံဆိပ်;
6. တံဆိပ်: ထွင်းထုဇာတ်ကောင်အရေအတွက်နှင့်ထုတ်ကုန်များအတွက်တိုက်ရိုက်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအပေါ်တံဆိပ်ပေါ်ရှိအခြားပုံစံ;
7. Wood ကအပြောင်းအလဲနဲ့: အပြောင်းအလဲနဲ့သိပ်သည်းဆဘုတ်အဖွဲ့, surfing ဘုတ်အဖွဲ့ဂေါ်လီလုံးရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့, အစိုးရအဖွဲ့နှင့်ပရိဘောဂများအတွက် stiletto;
ယခင်: 3-Axis Disk Auto Tool Changer CNC Wood Router Table M-A
နောက်တစ်ခု: Chencan AT1224AD ATC CNC အသိုက်အခြေပြု Router ရေးစင်တာ
Wood က CNC Router
Wood က CNC Router5ဝင်ရိုးတန်း
Wood က CNC Router စက်
Wood က CNC Router စက်စျေး
Wood က CNC Router ထုတ်လုပ်သူများ
Wood က CNC Router စျေးနှုန်းများ
Wood က CNC ဆိုင်
Wood က Copy ကူး Carver
Wood က Copy ကူးစက်ထွင်းထု
စက်ဖြတ်တောက်ခြင်း Wood က Craft
Wood က CNC Router စက်ဖြတ်တောက်ခြင်း
စက် CNC ဖြတ်တောက်ခြင်း Wood က
လက်မှုပညာသည်စက်ဖြတ်တောက်ခြင်း Wood က
ရောင်းရန်စက်ဖြတ်တောက်ခြင်း Wood က
Router ဖြတ်တောက်ခြင်း Wood က
Router စက်ဖြတ်တောက်ခြင်း Wood က
Wood ကဒီဇိုင်း CNC စက်
Wood က ဒီဇိုင်းစက်စျေး
CNC Router ဖြတ်တောက်ခြင်းပြုလုပ်ခြင်း Wood ကတံခါး
စက်များထွင်းထု Wood ကမိတ္တူပွား
ရောင်းရန် Wood ကဖောင်းကြွစက်
ရောင်းရန် Wood ကအက္ခရာ တင်.
Wood ကအက္ခရာ တင်.
Wood ကအက္ခရာ တင်. ထိုအစက်ဖြတ်တောက်ခြင်း
Wood ကအက္ခရာ တင်. CNC Router
Wood ကအက္ခရာ တင်. ကုန်ကျစရိတ်
Wood ကထွင်းထု ပစ္စည်းကိရိယာ
နေအိမ်သည် Wood ကထွင်းထုစက်
ရောင်းရန် Wood ကအက္ခရာ တင်. စက်
Wood ကအက္ခရာ တင်. စက် P ကို ဆန်
Wood ကအက္ခရာ တင်. စျေးနှုန်းများ
Wood ကအက္ခရာ တင်. Router
Wood ကအက္ခရာ တင်. န်ဆောင်မှုများ
Wood ကအက္ခရာ တင်. Tools များ
တစ်ဦးက Router နှင့်အတူ Wood ကအက္ခရာ တင်.
CNC လမ်းကြောင်းသည် Wood က
အက္ခရာ တင်. သည် Wood က
စက်ဖြတ်တောက်ခြင်း Wood က Frame က
Wood က Groove စက်ဖြတ်တောက်ခြင်း
Wood က Hole စက်ဖြတ်တောက်ခြင်း
စက်ထွင်းထု Wood ကပေးစာ
Chencan M1325A CNC Wood က Router စက်ရောင်းမည် ...
Chencan M2040A CNC သစ်သားထွင်းစက်
Chencan SFD2030Q မှို CNC Router စက်
Chencan M1530A3ဝင်ရိုး Wood ကတံခါးများအတွက် CNC Router ...
Chencan AT1224AD ATC CNC အသိုက်အခြေပြု Router Ce ...